Madaxda Dowlada Iyo Amabaasadoor Mahiige Oo Ka Hadlay Furitaanka Shirka Golaha Ansixinta Dastuurka | RBC Radio	Home
Monday, August 27th, 2012 at 12:39 am	/ 21 Comments Wednesday, July 25th, 2012 at 08:37 pm Madaxda Dowlada Iyo Amabaasadoor Mahiige Oo Ka Hadlay Furitaanka Shirka Golaha Ansixinta Dastuurka
Muqdisho (RBC Radio) Shirka lagu ansixinayo dastuurka cusub ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah kaga furmay magaalada Muqdisho iyadoona shirkaasi ay ka qaybgaleen madaxda dowlada Soomaaliya iyo masuuliyiin caalami ag.
Xarunta shirka oo ahayd Dugsiga taba barka ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee Gen. Kaahiye ayaa waxaa soo xaadiray inta badan ergada ansixinaysa dastuurka cusub ee Soomaaliya.
Ergaga qaramada midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Amabaasadoor Mahiige oo ka hadlay furitaanka shirka ayaa sheegay in shirkaan lagu ansixinayo dastuurka uu yahay mid muhiim ah mudana laga soo shaqaynayay.
Augstina Mahige ayaa ayaa sheegay in loo baahanyahay in ergadaan waqtiga loogu talagalay ay ku soo dhameeyaan howsha u taala oo ah in ay ansixiyaan dastuurka cusub.
Prof Cabdiweli Maxamed Cali Raysal wasaaraha Soomaaliya oo sidoo kale hadal ka jeediyay shirka ayaa sheegay in 21 sano ka dib lagu guuleysatay in la sameeyo dastuur cusub.
Sidoo kale Raysal wasaaraha ayaa carabka ku adkeeyay in dastuurkan uu yahay kii labaad oo ay yeelato Soomaaliya maadaama kii koobaad la sameeyay 1960 lana ansaxniyay 1961 haatane.
Madaxweynaha dowladda KMG ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa asna dhankiisa sheegay in maanta ay tahay maalin taariikh mudan oo u baahan in la xuso.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dastuur la’aan ayna dowladda hirgalikarin mudada uu burburka jirayna lagu soo dhaqmayay Axdi KMG ah, isagoona uga mahadceliya dadkii gacanta ka geystay sameynta dastuurka dalka.
Ugu danbayntii ayaa madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ugu baaqay ergada ansixinaysaDastuurka in waqtiga ay heestaan ay ka faa iideestaan isla markaana ay soo dhameestiraan howsha u taala oo ah in ay dastuurka go’aan ka gaaraan.
2 Responses for “Madaxda Dowlada Iyo Amabaasadoor Mahiige Oo Ka Hadlay Furitaanka Shirka Golaha Ansixinta Dastuurka”
keerow says:	July 25, 2012 at 9:53 pm	ARRINATAAN WAXEY TAHAY ” ANNAGA AYAA KARSANEY RAASHIINKAAN, ANNAGAANA CUNEYNO” KKKKK.
B Jameeco says:	July 26, 2012 at 2:58 am	Hadaan laba qof meeshaas laga qaban dagaal ma istaagayo waa faroole iyo shariif sakiin